Somaliland intay jirtay maanta ayay ugu liidataa mana geli karto dagaal ku waajahan sugidda xuduudaha dalka sababo jira dartood.10.01.18 : Salaan Media
Somaliland intay jirtay maanta ayay ugu liidataa mana geli karto dagaal ku waajahan sugidda xuduudaha dalka sababo jira dartood.10.01.18
Somaliland intay jirtay maanta ayay ugu liidataa mana geli karto dagaal ku waajahan sugidda xuduudaha dalka sababo jira dartood.
Qaab dhismeedkii siyaasadeed ee somaliland ee heshiiska lagu ahaa waxa uu gebi ahaanba is bedelay intii ka dambeysay shirkii beelaha subeer awal iyo H-jeclo ay ku qabsadeen magaalada Burco October 2017 shirkaas oo lagu kala saxeexday heshiis dhagar ku ah qaranka somaliland oo ka baxsan luuqada diblimaasiyadda kaas oo qalinka lagu duugay in xukunka Somaliland ay ku shuraakoobaan labadaas reer. Shirkaasi waxa uu dhaawac weyn gaadhsiiyay midnimadii qaranka Somaliland waxaana saaxadda warbaahinta ku soo biirtay kelmadda JEEGAAN oo awal hore qarsoonayd haatanse si qaawan loo adeegsado. Isbahaysigaasi waxa uu dhalay ololihii xisbiga kulmiye doorashada ku galay oo uu ekaa dagaal ku aaddan beelaha Gaxajis iyo Harti iyo Samaroon oo si gaar ah loogu beegsaday ololahaas. Muuse Biixi oo hadda ku fadhiya kursiga dalka looga taliyo ayaa fagaaraha ka sheegay in xisbia WADDANI iyo taageerayashiisaba aanay aaminsanayn Jiritaanka Somaliland ee ay ku socdaan Somaliya oo looga taliyo halkaas. Arrimahaas aan kor ku soo sheegay waxa si xun u kala qaybiyeen bulshadii isku dareenka ahayd oo haatan loo kala soocmay beelo beelo iyo is xulufaysi aan qarsoonayn. Marka somaliland ay xaladaas ku jirto una baahantahay dib u heshiisiin qaran iyo in laga jawaabo tabashooyinka isasoo taraya, ma geli karto dagaal ka dhan ah deriska ay xuduud wadaagta yihiin. Mar haddaan lagu wada qanacsanayn maamulka jira oo sida uu ku yimi aanay marnaba ansax ahayn ma jiri doonto difaac qaran oo laga wada qayb qaato maadaama aan heshiish lagu ahayn qeexidda cadawga Somaliland kaas oo taliska jeegaantu marba cid ku sheego. Maanta cidi waxba ka dhegaysan mayso kuwii shalay lahaa taageerayaasha xisbiga WADDANI waa cadawga Somaliland iyagoo ula jeeda beelo gaar ah oo taageera xisbiga haddana maanta ku hadaaqaya dadka Somaliland waa walaalo ee dalka ha laga difooco cadawga. In qaranka la wada difaacdo waxa ka horraysa in la wada yeesho oo talidiisu aanay beelo gaar ah kooto ugu xidhnaanin dheefta qarankana loo sinnaado. Haddii taas la waayo xataa amniga gudaha laga wada shaqayn maayo iska dhaaf difaaca xuduudaha e. maanta Somalilnad waxa duminayaa cidda kala qaybinaysa siyaasaddi dalka u rogtay heshiis beeleed u adeegaya reero gaar ah. Haddii run loo baahanyahay xaaladda dalku ku jiro ha laga garaabo intaan meel kale la eegin. Waxa dhici karta in kornaylada dalka ka taliyaa ay isku qanciyaan in shacabka reer Somaliland ee kala qaybsan lagu midayn karo dagaal lala galo Puntland waxayse mooganyihiin inaan taasi maanta dawo u noqonayn dadkii ay ku colaadiyeen fikirkooda siyaasiga ahaa ee isbedel doonka ahaa ee lagu tilmaamay inaanay muwaadin ba ahayn maadaama lagu sheegay Somalilweyn.
By : Cabdixakiim Muuse Cali
« Daawo WAR WAYNE :- Xildhibaanada Golaha Deegaanka Gabiley Oo Ansixiyey Miisaaniyad Sanadeedka 2018 Ay Ku shaqayn Doonaan..10.01.18
N.S. says it can’t help former child refugee facing deportation to Somalia »